Stockholm oo lagu soo Gabagabeeyay Shirka u socday Dhinacyada Yemen
HomeWararka CaalamkaStockholm oo lagu soo Gabagabeeyay Shirka u socday Dhinacyada Yemen
June 20, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Waxaa maanta magaalada Stockholm lagu soo gebagebeeyey howlihii Madasha Yemen Forum oo ay garwadeen ka ahayd Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden, waxaana arrimaha dhaqaalaha ay hareeyeen doodihii madasha oo maalintii labaad galay, iyadoo ay ka soo qeyb galeen Ergooyin ka kala socday Qaramada Midoobey iyo Mareykanka. Yemen iyo Safiirka Golaha Iskaashiga ee Dawladaha Carabta ee Khaliijka u jooga Yemen, waxaana xubnihii hadlay ay ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda uu faylkani u leeyahay xoojinta dadaallada lagu dhisayo nabadda iyo taageerada iyo sii wadida hay’adaha dawladda.
“Waxay isku dayayaan inay Yemen ka dhigaan mudnaanta Midowga Yurub in kasta oo ay sii socoto qalalaasaha Ukraine,” ayuu yiri Karl Hallgaard, agaasime ku xigeenka Waaxda Bariga Dhexe ee Midowga Yurub. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in dooda weyn ay hadda ku saabsan tahay furista waddooyinka iyo xirnaanshaha joogtada ah, taas oo caqabad ku ah awooddeena inaan taageerno dhaqaalaha Yemen.
Dhanka kale, Agaasimaha Guud ee Istaraatiijiyadda SDRPY , Adel Al-Qassadi ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la isku xiro waddooyinka bini’aadantinimo iyo kuwa horumarineed ee Yemen, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo aragti buuxda oo soo kabasho dhaqaale oo aan ku xirneyn kaalmada ay bixiyaan deeq-bixiyeyaasha.
Dhanka Agaasimaha Xafiiska Yemen ee Bangiga Adduunka, Tania Meir, waxay tiri: “Dadka Yemen waxay mudan yihiin taageero dhan walba ah, Baanka Adduunkana wuxuu ka walaacsan yahay jilicsanaanta qalalaasaha Yaman. Waxaan go’aansannay inaan kordhino barnaamijyadayada halkaas oo aan bixinnay $1 bilyan oo maalgelin ah sannadkii la soo dhaafay.